Sarimihetsika : Handray anjara amin’ny RFC ireo mpanatontosa sarimihetsika amerikana roa -
AccueilVaovao SamihafaSarimihetsika : Handray anjara amin’ny RFC ireo mpanatontosa sarimihetsika amerikana roa
Sarimihetsika : Handray anjara amin’ny RFC ireo mpanatontosa sarimihetsika amerikana roa
16/04/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Avy amin’ny fandaharan’asa « American Film showcase ». Mandalo eto amintsika ary handray anjara amin’ireo hetsika ho an’ny horonantsary fohy ‘RFC) ireo mpanatontosa horontsary amerikana roa ahitana an’ i Amy Scott sy Marc Levin. Fivahinianana sy fanasana avy amin’ny masoivoho amerikana eto amintsika izay vatsian’ny departemantam-panjakana amerikana vola, ary iarahana manatanteraka amin’ny University of Southern California School of Cinematic Arts. Tafiditra ao anatin’ny fandaharam-potoan’izy mianadahy ireto ny fandefasana horonantsary arahina adihevitra, izay hanomboka anio amin’ny 11 ora etsy amin’ny Institut Français de Madagascar (IFM) Analakely ka ilay horonantsary « Class divide » notontosain’i Marcl Levin no hisantarana izany. Mbola io horonantsary io ihany no entina eny amin’ny Amphi 10 – Oniversiten’Antananarivo rahampitso, ary eny amin’ny E-Media Ampasanimalo ny alarobia 18 avrily. Ilay horonantsary « Oyler » notontosain’i Amy Scott kosa no horaisin’ny Cinepax etsy Ambodivona ny zoma 20 avrily amin’ny 2 ora tolakandro.
Ankoatra ny fandefasana ireo horonantsary ireo, dia hisy ihany koa ny fifampizarana traikefa momba ny famokarana horonantsary fanadihadiana izay ataon’izy mianadahy ireo ny Alakamisy izao amin’ny 9 ora etsy amin’ny American Center Tanjombato, ka ny « fiainana amin’ny maha mpanao gazety sy mpanatontosa horonantsary » no lohahevitra hiarahana amin’i Amy Scott. Amin’ny 2 ora tolakandro kosa dia miainga amin’ny lohahevitra « Famokarana horonantsary fanadihadiana mafonja », hiarahana kosa amin’i Marc Levin. Ny zoma 20 avrily kosa dia fifanakalozana momba ny atao hoe « Story telling and activism ». Misokatra ho an’ny besinimaro ary maimaim-poana avokoa ny fandraisana anjara amin’ireo hetsika ireo, ary ny fifanakalozana dia arahana fandikan-teny avokoa.